Home Wararka Soomaalida qaxootiga ku ah dalka Yemen oo soo wajahday xaalad dag
Soomaalida qaxootiga ku ah dalka Yemen oo soo wajahday xaalad dag
Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya dalka Yemen Soomaalida qaxootiga ah ee ku dhaqan dalkaas ayaa xaalad adag oo dhanka nolosha ah ay soo wajahday. Sababta ay xaaladdan usoo wajahday ayaa lagu sheegay kadib markii xerada Alqaras ee Koonfurta Yemen laga eryey hay’adihii gacanta ku hayey dadkan oo ay ugu weyn tahay UNHCR.
Ceyrinta Hay’adda UNCHR ayaa waxa ay khatar galisay nolosha shacabka ku dhaqanaa xeredaas oo aan haysanin nolol. Waxaan halkaa ka jirin cunto, Biyo, iyo waxbarasho halkaasi ka jirta, waxaana xeradan dadka ku nool ugu badan Soomaali, hadda u baahan in loo gurmado.
Sababta hay’adaha loo eryey ayaa ah, kadib markii ay isku dhaceen dadka deegaanka, maadaama ay shaqada ka eryeen askar iyo macallimiin Yemeniyiin ah.